Iindaba - Yintoni isiSeko seMold?
Yintoni isiseko sokubumba?
Iseti epheleleyo yokubumba kwimveliso yeemveliso ezithile zomgubo ngokucinezela okanye ngokucinezela kwakhona.
Ukongeza, inkxaso yokubumba ikwabizwa ngokuba sisiseko sokubumba. Umzekelo, umatshini die-eyahlulayo idibanisa kwaye ilungisa iindawo ezahlukeneyo zokubumba ngokungqinelana nokuma okuthile kunye nendawo, kwaye nenxalenye enokuxhonywa kumatshini wokuphosa ubizwa ngokuba sisiseko sokubumba, kunye nendlela yokutyhala, Indlela ekhokelayo, kunye nothintelo langaphambi kwendlela yokuseta yenzelwe iphedi yokufa kunye nembasa yesihlalo.
Okwangoku, ukusetyenziswa kwesikhunta kubandakanya yonke imveliso (enje ngemoto, i-aerospace, iimfuno zemihla ngemihla, unxibelelwano ngombane, izixhobo zonyango, njl. Logama nje linani elikhulu leemveliso, imveliso yokubumba iya kusetyenziswa, kwaye isiseko sokubumba siyinxalenye engenakuhlukaniswa yokubumba. Okwangoku, iimfuno ezichanekileyo zeziseko zokubumba ziya kugqitywa ngokweemfuno zemveliso ngokwamanqanaba ahlukeneyo.
Isiseko sokubumba yimveliso egqityiweyo yokubumba, enamalungu ahlukeneyo esinyithi afanelekileyo, kwaye kunokuthiwa ngamathambo okubumba konke. Ngenxa yomahluko omkhulu ekusebenzeni okubandakanyekayo kwiziseko zomngundo kunye nokubumba, abavelisi bokungunda baya kukhetha uku-odola iziseko zomngundo ezivela kubavelisi besakhelo sokubumba, basebenzise ithuba lokulunga kwamaqela omabini ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nokusebenza kakuhle.
Emva kweminyaka yophuhliso, imveliso yefomwork form ikhulile. Ukongeza kwiziseko zokubumba zesiko, abavelisi bokubumba banokukhetha iimveliso zesiseko sokubumba. Ifomathi esemgangathweni ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye ixesha lokuhambisa lifutshane, nokuba lilungele ukusetyenziswa, ukubonelela abavelisi bokubumba ngokuguquguquka okukhulu. Ke ngoko, ukuthandwa kwefomwork esemgangathweni kuyanda.
Ngokufutshane, ifomwork inesixhobo sokwakha kwangaphambili, isixhobo sokubekwa, kunye nesixhobo sokukhupha. Ngokubanzi iqulunqwe njengepaneli, ibhodi (imodeli engaphambili), ibhodi ye-B (imodeli engemva), ibhodi ye-C (isinyithi sesikwere), ipleyiti engezantsi, ipaneli yokuhamba, ipleyiti engezantsi, kunye neposti yesikhokelo, ipini yokubuyisa kunye nezinye izinto zokugcina.
Egqithileyo Zeziphi iindidi ezisibhozo zomngundo wenaliti?